I-HWID Spoofer 🥇 Engatholakali Ye-HWID Changer Yemidlalo eku-inthanethi - Gamepron
Ngisho ukuvinjelwa kwe-ID yehadiwe kungavimba abasebenzisi beGamePron ekugenceni emidlalweni abayithandayo, njengoba konke okumele ukwenze ukusebenzisa enye ye-HWID Spoofers yethu. Ngenkathi abanye abadlali bezindla ngempilo ngemuva kokuvinjelwa kwe-ID yehadiwe, ungakhululeka! Sihlale sinezinketho ezintsha ze-ID zabo bonke abasebenzisi bethu lapha eGamePron.
I-JUMP TO Ama-Spoofers
Usuvele uthole ukufinyelela ku-HWID Spoofer? Thola amanye ama-stellar cheats ozosebenza nawo lapha!
Sicela wazi: Ngaphambi kokuthenga i-HWID Spoofer yethu, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kuvuselelwa noma lisasebenza ku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Khetha a Spoofer
Khetha i-HWID Spoofer efanele elingana nezidingo zakho zokugenca njengegilavu
Konke okudingekayo yizinyathelo ezi-3 ezilula zokusebenzela indlela yakho ezungeze ukuvinjelwa kwe-ID yehadiwe!
Ukugwema ukuvinjelwa kwe-HWID akukaze kube lula ngenxa yethimba le-GamePron
Khetha ukuthi yimaphi amageyimu ongathanda ukuwathenga enye ye-HWID Spoofers yethu, amathuba okuthi sinakho okufunayo aphezulu kakhulu.
Khetha i-HWID Spoofer elingana kahle kakhulu
Kunokwehluka okuningana kwe-HWID Spoofer etholakala lapha ku-GamePron, konke okuzonikeza izinzuzo ezahlukahlukene.
Yenza inkokhelo yakho usebenzisa izindlela zethu zokukhokha eziphephile
Sisebenza sisebenzisa iprosesa yokukhokha ephephe ngokuphelele ukuqinisekisa ukuthi imininingwane yomuntu siqu yamakhasimende ethu ayikho engcupheni.
Kungani Ngingasebenzisa I-HWID Spoofer evela ku-GamePron?
Abanye abaduni bazocabanga ukuthi ukuvinjelwa kwe-ID yehadiwe kuzophelisa ukubusa kwabo kuze kube phakade ngaphandle kokuthi bazimisele ukuthenga ikhompyutha ehlukile. Ukuvinjelwa kwe-Hardware ID kuyingozi ngomqondo wokuthi awusoze wavunyelwa, okuwukuphela kwendlela okufanele usebenze ngayo yi "spoofing". Le yinqubo abaduni abaningi abajwayelene nayo, yize labo abangekho endaweni efanele! Ikhompyutha yakho izoba ne-ID yehadiwe enikezwa izinto ezithile ngaphakathi, njengamakhadi wakho wemidwebo nezinto zalolo hlobo - lapho enye yazo imakwe ngokuvinjelwa kwehadiwe, ikhompyutha yakho ayisakwazi ukufinyelela umdlalo njalo.
Le yinkinga yezizathu ezisobala ngoba lokhu kuzovimbela abasebenzisi ekudlaleni imidlalo abayikhokhele. Vele, ukwephula i-TOS (Imigomo Yensizakalo) kuhlala kusebenza lapho kugqekezwa, ukusebenzisa i-HWID Spoofer yethu kuzokuvumela ukuthi ukhohlise ngaphandle kokunakekelwa emhlabeni! Noma ungagcina uvinjelwe ungavele wethule i-HWID Spoofer yethu bese uqeda uhlelo lwakho usebenzisa enye yama-ID ethu akhiqiziwe. Abaphathi besiphakeli nezinhlelo zokuthola ukukopela okuzenzakalelayo (njengeBattlEye noma iVanguard) ziya ziqina ngokuhamba kwesikhathi, kepha ngeke zikwazi ukuvimbela bonke o-ID bakho.
Ukuba nenkululeko yokwenza noma yini ongathanda ukuyenza emidlalweni oyithandayo kuyakhanyisa, ukusho okuncane. Uyaqaphela ukuthi mhlawumbe kukhona amathani abanye abasebenzisi abakhohlisayo, futhi bebekwenza lokhu sonke lesi sikhathi; usanda kuthola imemo ukuthi ifike sekwedlule isikhathi konke! Manje njengoba usuthole i-GamePron usungagenca kuze kube yilapho inhliziyo yakho yenelisekile, njengoba ukusebenzisa i-HWID Spoofer yethu kuzovimbela noma yikuphi ukuvinjelwa okungalindelekile ukuthi kuphele isikhathi sakho esihle. I-Easy Anti-Cheat, i-COD Anti-Cheat, nezinye izinsiza eziningi zizosekelwa ngokuzenzakalela uma usebenza ne-GamePron, uqinisekise ukuphepha kwakho ngenkathi udlala noma yimuphi umdlalo ozisebenzisayo.
Inqubo ye-spoof izohlala isebenza kuze kuqale kabusha amawindi wakho alandelayo.
I-OS esekelwayo: Windows 10 (konke kwakha)
I-CPU esekelwayo: I-Intel ne-AMD
I-GPU esekelwayo: INvidia ne-AMD
Ezokuphepha: UHwid ukhiyiwe
Ama-Anti-Cheats asekelwayo: I-Battleye, i-Easy Anti Cheat, i-COD Anti cheat, iVanguard.
HWID Spoofer Imidlalo esekelwayo
Idinga i-Reformat ne-BIOS MODE: UEFI, Ngeke isebenze kuLifa
Idinga ukuguqulwa kabusha
I-COD Modern Warfare neWarzone
COD Impi Yomshoshaphansi
Izinto ezimbalwa okufanele uzazi nge-HWID Spoofer yethu
Besihlala njalo sifuna ukubeka amandla ngqo ezandleni zabasebenzisi bethu lapha eGamePron, kanti iHWID Spoofer izokukhombisa ukuthi sisho ukuthini ngalokho. Awusasele ukubhekana nemiphumela oyinikezwa yizinhlelo ezizenzakalelayo zokulwa nokukopela, futhi kungani kufanele ube njalo? Ukhokhele lo mdlalo futhi ufanele ukuwudlala noma ngabe ungathanda, noma ngabe lokho kusho ukwethula ama-hacks ambalwa kumxube (ongawathola lapha ku-GamePron, ngendlela!).
Izingxenye ezingazodwana zekhompyutha yakho zinikezwa inombolo eyingqayizivele uma zenziwa, futhi leyo yinombolo ye-serial abayiphatha kuyo yonke impilo yabo. Noma nini lapho ikhompyutha yakho ishaywa nge-ID ye-hardware ban kungabonakala njengokuphela komhlaba, njengoba lokho kunguhlobo olulodwa lokuvinjelwa olungasoze lwaguqulwa.
Singasiza ekuqedeni ukuvinjelwa kwe-Hardware ye-Hardware ngokusebenzisa isoftware yakho nokwethula ama-ID ahlanzekile we-Hardware ukukusiza ukweqa okwenzile esikhathini esedlule, kepha kunezimo ezithile lapho kutholakala khona amanani wokuvinjelwa. Lokhu akukaze kwenzeke ngeGamePron (lapho ubhekene nemidlalo yeBattlEye neVanguard), njengoba kuza nohlelo olukhethekile lokuhlanza olusetshenziselwa ukukhomba nokuhlanza amafayela wokulandela umkhondo.
Isebenza Kanjani I-HWID Spoofer?
I-HWID Spoofer yethu vs. Umncintiswano
Yini i-HWID Ban?
Ungayidlula kanjani i-HWID Ban
Kusetshenziswa i-spoofer ye-Hardware ye-Hardware kulula impela, yize abanye abahlinzeki be-hack kungenzeka bangazinikeli ngokwabo. Le yinkonzo etholakala kuphela lapha eGamePron, futhi siyinikeza ngoba ukuvinjelwa ekudlaleni imidlalo oyithandayo ukuhlambalaza emehlweni ethu. Ungathembela kithi ukuthi sizokugcina usempini, noma ngabe kukhona abantu (noma izinhlelo) lapho abazama ukukubamba! Ukwakha i-rig entsha yokudlala kuzokubiza izinkulungwane zamaRandi, futhi ukuzama ukuthola ucezu lwehadiwe olwenqatshelwe kwikhompyutha yakho akulunge neze; ungavele ukhiqize i-ID entsha yehadiwe usebenzisa i-GamePron futhi ube sendleleni yakho yokujabula!
Lapho usuthole ukufinyelela kwinsizakalo yethu ye-HWID Spoofer, ungasebenzisa enye ye-ID yehadiwe etholakalayo eyakhiwe yithi ukonakalisa uhlelo lwakho. Uma uzama ukuxhuma kumaseva wanoma yimuphi umdlalo onikeziwe, ngeke babone ukuthi udlala kukhompyutha evinjelwe! Esikhundleni salokho, konke abazokubona ukuthi une-ID ehlanzekile yehadiwe esebenzayo, futhi lokho kubanele ngokwanele. Abanye abahlinzeki be-hack bathi banikela ngensizakalo ethembekile yokwenziwa kwe-spoofing, kepha akekho noyedwa ongaphatha inqubo efana ne-GamePron.
Mhlawumbe uyazibuza ukuthi yini umehluko phakathi kweGamePron nabo bonke esincintisana nabo, futhi impendulo ilungile phambi kwakho! Isizathu esenza ukuthi bonke abasebenzisi bethu baqhubeke nokuthembela ku-GamePron ngezidingo zabo ze-HWID spoofing ukuthi sinikeza imiphumela, futhi senza kanjalo ngaphandle kwezintambo ezinamathiselwe. Azikho izimali ezifihliwe futhi besingeke silinganisele abasebenzisi bethu uma kukhulunywa ngezici ezitholakala kwi-HWID Spoofer, ngakho-ke yini enye ongayenzela yona? Iqiniso lokuthi sinikela ngezinhlobo ezimbili ezihlukile zobulungu (i-VIP ejwayelekile kanye ne-VIP) likhombisa ukuthi ukuguquguquka kungaphezulu ohlwini lwethu olubekwa phambili, futhi lokho kuyasiqinisa njengompetha uma kuqhathaniswa nalabo esincintisana nabo. Ungathola izinsizakalo zokuphamba ze-HWID kwenye indawo, kepha ngeke zikuqinisekise ukuphepha kwe-akhawunti yakho (okuyilokho esizimisele ukukwenza lapha).
Zenzele umusa futhi ulahle umqondo wokuzama ezinye iziphathi ze-HWID, asikho isizathu sokubheka kwenye indawo uma usuvakashele i-GamePron. Abanye bangahle bathi lokho kuvela njengokuzikhukhumeza, kepha siyazethemba nje ngezinsizakalo zethu - indlela engcono yokuzwa nge-spoofer yethu ye-HWID kungaba ngokuzama ukuvinjelwa kwakho kwe-HWID.
Ukuvinjelwa kwe-Hardware ID kuyaphasiswa lapho umphathi (noma ezimeni eziningi, insiza yokuthola ukukopela okuzenzakalelayo) ebona ukuthi uyakopela, bese unikeza isijeziso esiqine kakhulu. Abanye abantu bazoshaywa ngokuvinjelwa okwesikhashana noma ngisho nokuxwayiswa ngezinye izikhathi, kodwa lokho akunjalo lapho unikezwa ukuvinjelwa kwe-HWID. Lokhu ukuvinjelwa okuphathelene nama-ID ayingqayizivele ahlobene ne-hardware ekhompyutheni yakho, ngokungafani nento efana ne- "IP Ban", engavimbela kuphela ukuxhumana kwakho kwe-inthanethi. Ukubhekana nokuvinjelwa kwe-ID yehadiwe akunakwenzeka ngaphandle kwenqubo yokuphamba ngaphandle uma uzimisele ukwakha ikhompyutha entsha sha ngazo zonke izingcezu ezintsha. Abanye abantu balungile nalokhu uma bezothuthukisa noma kunjalo, kepha cabanga nje ukuthi ungachitha malini ukukwenza njalo!
Yonga isikhathi esiningi nemali ngokuzibandakanya kwinqubo yokuqothula i-HWID! Noma iyiphi i-akhawunti oyakha kukhompyutha ebiyikhompuyutha ye-hardware ivinjelwe izovinjelwa uqobo ngokushesha, ngakho-ke yenza ukuzama ukudlala lo mdlalo ngendlela obejwayelekile ngayo.
Ukweqa ukuvinjelwa kwe-HWID kungaba ngumsebenzi onzima uma ufuna ukuhamba ngenye indlela, kepha ukuthembela ku-GamePron nakwi-HWID Spoofer yethu kuzoba lula kakhulu. Abanye abantu bazama ukukhomba ukuthi iyiphi i-ID ohlelweni lwabo evinjelwe futhi babhekane nayo ngokufanele, kepha leyo yinqubo ethatha isikhathi ukuthi ngungoti odabeni kuphela ozokwazi ukuyiphatha. Esikhundleni salokho, ungavele usebenzise uhlu lwe-ID yehardware ekhiqizwa ngokuzenzakalela etholakala ku-HWID Spoofer yethu! Uzoba nokufinyelela kuma-ID wekhompiyutha onokwethenjelwa lapho usebenza ne-GamePron, okuyisidingo lapho ufuna ukugenca ngokuzethemba. Abasebenzisi akusadingeki ukuthi balayishe ama-hacks abo ngokukhathazeka ngokuvinjelwa kwe-ID yehadiwe, njengoba ungavele uchithe indlela yakho eyedlule ngemuva kwalokho.
Uhlelo lwe-HWID Spoofer lwenza ukukhethwa kanye nokusetshenziswa kwe-ID entsha yehadiwe kuphumelele kakhulu kunezimbangi zethu, ngakho-ke konke ongakudinga ukweqa ukuvinjelwa kwe-HWID kungatholakala lapha.
Hwid Spoofers Imibuzo
Khetha ekukhetheni kwethu okubanzi kwe-HWID Spoofers ukuze wenze izindlela zakho zokugenca zilunge
Kungani ngisebenzisa i-HWID Spoofer yakho?
Ukuvinjelwa kwe-Hardware ID kuvamise ukuba yisigwebo sentambo kubaduni, ngoba akekho umuntu ozokwakha kabusha amakhompyutha abo kusuka phansi ukuze agweme eyodwa. Izindaba ezimnandi ukuthi awusadingeki ucabange ukwakha i-rig entsha yokudlala, njengoba i-GamePron ingakusiza ukuthi uthole ukuvinjelwa okwedlule kwe-HWID ngaphandle kwakho
kokuhlupheka okuningi. Ngeke nje ukwazi ukugwema ukuvinjelwa kwangaphambilini usebenzisa i-HWID Spoofer yethu, kepha noma yikuphi okunye ukuvinjelwa okuza phakathi nohambo lwakho lokugenca nakho kungaphathwa! Sihlale sineqoqo elisha lama-ID wehardware labasebenzisi beGamePron abangazuza kulo, futhi sihlala siwavuselela ukuze siqinisekise ikhwalithi engcono kakhulu.
Esikhundleni sokuchitha imali yakho uzama ukushintsha izingcezu ze-hardware ezivinjelwe, ungavele ube yilungu leGamePron futhi uphathe konke ukuvinjelwa kwakho kwe-HWID ngaleyo ndlela. Kulula kakhulu kunanoma iyiphi enye indlela ngaphandle lapho, lokho kuqinisekile!
Mangaki ama-ID wehadiwe okufanele unikele ngawo?
Inani le-ID yehardware etholakala ku-GamePron lizohluka, kepha kufanele wazi ukuthi bazoba baningi kungakhathalekile. Ngenkathi singaba nokuningi esingakhetha kukho ngezikhathi ezithile, akufani nokuthi uzohlushwa ukungabi nezinketho ngeGamePron. Sinezikhulu (uma kungezona izinkulungwane) zama-ID wehadiwe ongazisebenzisela ukwengeza kwakho, futhi luluhlu olukhula njalo, njengoba ulisebenzisa. Abanye abahlinzeki bale nsizakalo bavame ukunikela ngenombolo elinganiselwe yama-ID e-hardware kubasebenzisi babo, futhi kwesinye isikhathi lokho kungaholela ekugqagqaneni kancane; le ngenye yezindlela ezilula zokuvinjelwa.
Gwema izinkinga eziza ne-disofter hardware ID spoofer bese ujoyina i-GamePron namuhla! Thola ukufinyelela okungenamkhawulo kwinsizakalo enhle kakhulu ye-HWID Spoofing etholakala ku-inthanethi futhi ungalokothi ubheke emuva.
Ibiza malini iHoid Spoofer yakho?
Uma kuqhathaniswa namanye ama-HWID Spoofers, kusobala ukuthi i-GamePron ihlinzeka insizakalo yethu ngezinga elingabizi. Ukube ubuzimisele ukwakha ikhompyutha entsha sha ukugwema ukuvinjelwa kwakho, bekungaba nengqondo ukuthi utshale imali encane kakhulu ngokuthola ukufinyelela kwiHWID Spoofer yethu! Yize singazithatha njengensizakalo ye-premium ebeka ikhwalithi yomsebenzi wethu phambili, sisafuna ukugcina iphuzu lentengo elingabizi. Lesi ngesinye futhi isizathu esenza abasebenzisi bazimisele ukubhalisela i-GamePron, njengoba singabeki abantu ngamanani angenangqondo.
Kuhlala njalo kungcono ukuthi uzitshalele imali njengesigebenga, ngokungafani nomshini owusebenzisayo. Yenza ngokwakho futhi uthole ukufinyelela kwinsizakalo yethu ye-HWID Spoofing namuhla.
Kwenzeka kanjani ukuthi izimbangi zakho zingabi zinhle?
Umncintiswano uhlala unzima uma kuziwa embonini yokugenca, yingakho i-GamePron ingaze ikhiphe into engazange ihlangabezane namazinga ethu. Nge-HWID Spoofing, kufanele wenze umsebenzi ophelele uma kukhulunywa ngenqubo yentuthuko, futhi lowo ngumehluko omkhulu phakathi kwe-HWID Spoofer yethu nabanye. Abanye abahlinzeki bavele bashaya ithuluzi labo ndawonye, ​​okungenzeka bahlanganise ama-ID wehadiwe emthonjeni wesibili (okungaholela kubasebenzisi abaningi abazama ukuxhumana ne-ID efanayo yehadiwe, okudala isiyaluyalu enqubeni). Lapho umuntu efuna ukuzwa inqubo ebushelelezi yokugenca ngokugwema ukuvinjelwa kwe-hardware, i-GamePron ukuphela kwesisombululo esisebenzayo.
Esincintisana nabo abakwazi ukuhambisana nenombolo yama-ID wehadiwe atholakala kwaGamePron, futhi ngokuqinisekile ngeke ahambisane nezinga lethu lokuxhaswa kwamakhasimende; yingakho zingalungile!
Ngabe kufanele ngivele ngishintshe ikhompyutha yami?
Abantu abaningi abashaywe nge-ID ye-hardware ban bangaphendukela ekuqedeni ukushintsha i-rig yokudlala abayisebenzisayo, engaba yinkinga kwezinye izimo. Vele, abanye abantu bazothuthukisa noma kunjalo, kepha lolo hlobo lokwehlula injongo - awudingi ukulahla ikhompyutha ngoba ubukade uyi-Hardware ID evinjelwe kumdlalo wakho owuthandayo! Esikhundleni salokho, ungavele ubhalisele insizakalo yethu ye-HWID Spoofing futhi uzobe udlala ngokungafani nalutho olwake lwenzeka kwasekuqaleni. Ngenkathi ungahle uthande ukucabanga ukusebenzisa i-akhawunti entsha, akusho ukuthi kuzodingeka ufake enye ikhompyutha yakho - ukusebenzisa i-akhawunti evinjelwe i-HWID esikhathini esedlule kwikhompyutha ene-spoofed kusengaholela kuzinkinga uma ungekho qaphela.
Amakhompyutha azokubiza izinkulungwane zamaRandi, ngakho-ke kungani uzihlupha ngakho konke lokho uma nje ungathembela kwinsizakalo yethu ye-HWID Spoofing ukukubuyisela emdlalweni? Ukuphila nomphumela wokuvinjelwa akusewona amaqiniso akho, ngoba ungahlala ukhohlisa "ukudlala ukufa" usebenzisa i-HWID Spoofer yethu.
Ngabe sengizovinjelwa futhi?
Ukuthola ukuvinjelwa kwe-HWID kungenzeka kungumphumela wokugenca kwakho ngendlela esobala, noma noma ngabe usebenzisa ama-cheats angahambelani nalabo ozobathola ku-GamePron. Indlela elula yokugwema ukuvinjelwa kwasekuqaleni kungaba ngokusebenzisa ukukopela okuphezulu okuvela kumhlinzeki onokwethenjelwa, okuwukuphela kwento ozoyithola lapha! I-GamePron yakhe ibhizinisi ngokuya ngedumela lethu lezinkanyezi, okusho ukuthi zonke izinkohliso ezitholakala kuwebhusayithi yethu zizokusebenzela kahle. Ukukopela kwethu akugcini ngokutholwa ngo-100%, kepha uma ngasizathu simbe ugcina uvinjelwe, ungavele ubuyele ku-HWID Spoofer yethu uphinde ukwenze futhi!
Kungaba yindilinga enonya ngezikhathi ezithile, njengoba ukuvimbela ngamasu okungabonakala kungumsebenzi onzima nabanye abahlinzeki. Lokho akusenjalo uma ubhalisela i-GamePron, njengoba uzokwazi ukufinyelela kuwo wonke ama-hacks amahle kakhulu (futhi aphephile!) Online, kanye ne-HWID Spoofer ehamba phambili. Kungcono kunazo zonke zomhlaba lapho uba yilungu leGamePron, ngakho-ke ulindeni?
Yimiphi imidlalo engingayisebenzisela i-HWID Spoofer?
I-HWID Spoofer ingasetshenziselwa yonke imidlalo oyithandayo, ngoba ayigcinelwe noma yisiphi isihloko esithile. Ukuvinjelwa kwe-HWID akuhlangene nakancane nemidlalo uqobo, yize kungahle kukuvimbe ekutholeni eminye. Ukuvinjelwa kwe-HWID kuzothatha isikhathi kuze kube kubhekwana nakho, kukuvimbele ukuthi ungene ngemvume ku-akhawunti yakho evinjelwe kuze kube izinto zihlelwa; umdlalo ovinjelwe kuwo ucishe ungabalulekile. Uma nje ukwazi ukuphazamisa i-HWID yakho futhi wenze amaseva abonakale ngathi udlala kumshini ohlukile, alikho ithuba lokukuvimba!
Lokhu kuhle uma ufuna ukuthola ukulungiswa kwakho kokugenca, kepha ukuvinjelwa kwe-HWID kukuvimbela ekwenzeni lokho. Ungazami ukuthola i-HWID Spoofer eqondene nomdlalo, ngoba ayikho into enjalo! Noma ngabe yimuphi umdlalo ofuna ukuwudlala futhi, ungasebenzisa i-GamePron ne-HWID Spoofer yethu ukwenza indlela yakho ezungeze ukuvinjelwa kwe-HWID ngokuzethemba.
Ngingayisebenzisa isikhathi esingakanani i-GamePron HWID Spoofer?
Sivumela abasebenzisi bethu ukuthi bathole ukufinyelela inqobo nje uma bengathanda njengoba sinamaphakheji ambalwa ahlukile atholakalela amalungu e-GamePron. Isikhathi osinikezwe ukufinyelela i-HWID Spoofer sinqunywa ubulungu bakho, yingakho singahlala sincoma labo abagenca kaningi ukuthi bacabangele ukubhalisela i-VIP. Ngeke nje ube nesikhathi esengeziwe sokusebenzisa ama-hacks ethu, kepha kunezinye izinzuzo eziningana (njenge-HWID Spoofer!) Ozocabanga nazo.
Singahlala sincoma ukuthi abasebenzisi bacabangele ukusebenzisa i-HWID Spoofer yethu ngaphambi kokuthi bavinjelwe kwasekuqaleni, ngoba lokho kuzovimbela i-ID yabo yangempela yehadiwe ukuthi ingavinjelwa ngenkathi igenca. Cishe kufane nokufaka isilinganiso esingeziwe sokuphepha ku-rig yakho yokudlala!
Okukhethiwe kwethu Hwid Spoofers
Hwid Spoofer, Thola ukuvinjelwa, Susa ukuvinjelwa kwe-Hwid, i-Hardware ID changer
Awesome Hwid Spoofer Izici